Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Mareykanka Oo Sheegay Hadal Dhabar Jab Ku Ah Madaxweyne Trump – somalilandtoday.com
Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in waaxdiisa cadaaladda ayna helin wax caddeyn ah oo ay ku taageerto sheegashada madaxweyne Donald Trump ee musuqmaasuqa doorashada 2020-ka.
Mr Barr wuxuu ka mid yahay dadka aadka ugu dhow madaxweynaha iyo xeer ilaaliyeyaasha loo igmaday inay baadhaan wax isdaba marinta la sheegay Laakiin wuxuu sheegay in aanu arkin wax dhanka kale u rogi kara guusha Joe Biden.
Mr Trump wuxuu sii waday sheegashooyinka aan salka lahayn ee ah in doorashada lagu shubtay waxa uuna gaashanka u daruuray inuu qirto in laga guulleystay. Wuxuu kulan Aqalka Cad kula qaatay Mr Barr.
Qareenada madaxweynaha (Rudy Giuliani iyo Jenna Ellis) ayaa sheegaya in xeer ilaaliyaha guud uusan wax badan ka qaban baadhitaanka, waxayna wacad ku mareen inay sii dagaalamayaan.
Hadalka xeer ilaaliyaha ayaa waxa uu dhabar jab weyn ku yahay madaxaweyne Trump, kaasi oo ganafka ku dhuftay inuu aqblo in laga guuleystay.
Madaxweynaha la doortay ee Joe Biden ayaa ka adkaaday madaxweynaha hadda xilka haya ee Trump oo helay codad dhan 232 halka Bidena uu helay 306 oo ah codadka Electral collage-ka, halka codadka caadiga ah uu Biden ku hogaaminayay in ka badan 6.2 milyan.
Tan iyo doorashadii 3-dii Nofeembar, Mr Trump wuxuu si isdaba joog ah u sheeganayay sheegashooyin aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsan musuqmaasuq baahsan oo xagga cod-bixiyayaasha ah, xubno ka tirsan kooxdiisa difaaca sharciga ayaa ka hadlay shirqool la sheegay inuu caalami ahaa oo Mr Biden loogu gacan gelinayo guusha.
Haatanna ka dib markii la sii daayay hadallada Mr Barr, madaxweynaha ayaa dhowr jeer bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku tilmaamaya musuqmaasuq la xiriira codbixiyeyaasha, isagoo aan mar kale hayn wax cadeyn ah.
Mr Barr wuxuu sheegay in Waaxda Caddaaladda iyo Waaxda Amniga Gudaha ay baadheen sheegashadaas, “illaa iyo haddana, ma aanan arag wax caddeyn ah oo ku aadan arrintaas”.
Afhayeen u hadlay Waaxda Caddaaladda ayaa markii dambe sheegay in waaxada ayna weli soo gababgabeyn baadhitaankeeda, waxa uuna sheegay iney sii wadi doonaan baadhitaanka.
Dhanka kale, hogaamiyaha xildhibaanada Dimuqraadiga ee senate-ka Chuck Schumer ayaa warbixinta Mr Bar ka dib yidhi: Waxaan qiyaasayaa in Mr bar uu noqon doono qofka xiga ee shaqada laga eryi doono.
Chris Krebs, oo madax ka ahaa Amniga dhanka internet-ka ee Mareykanka ayaa shaqada laga eyriyay bishii hore ka dib markii uu muran ka keenay sheegashada Mr Trump ee been abuurka ah.